.: Public Holidays in Singapore 2010
Public Holidays in Singapore 2010
မကြာသောအချိန်အတွင်းမှာ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးလို့ နှစ်သစ်ကို ရောက်လာပါတော့မယ် အရင်ဆုံးကြည့်မိတာကတော့ နောက်နှစ်မှာ ဘယ်နေ့တွေ ဘယ်လို ပိတ်မလဲဆိုတာပါ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး နောက်နှစ်အတွက် ပိတ်ရက်လေးတွေကြည့်ပြီး ကြိုပျော်မိနေတာ =)
Sunday*, 14 Feb 2010
* As Chinese New Year falls on Sunday 14 Feb and Mon 15 Feb, the next day, Tuesday 16 Feb 2010, will beapublic holiday.
Friday, 02 Apr 2010
Friday, 05 Nov 2010**
* The date for Deepavali,5Nov 2010, needs to be checked against the Indian Almanac when it is available.
ပိတ်ရက်တွေက များသောအားဖြင့် သောကြာနေ့တွေချည်းပဲ၊ စနေ ရုံးတက်စရာ မလိုတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးပေါ့။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အားလပ်ရက်၊ ပိတ်ရက်တွေကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အချိန်ကုန်လွန်နိုင်ကြရင်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြပါစို့ ........
Posted by Waing at 12/29/2009 02:00:00 PM
ဟားဟား ညီမလေးဝိုင်းနဲ့ အမတို့ကတော့ အကြံတူသွားပြီဟေ့..................
Same idea! I had seen it aldy... Happy getting long weekends... but.. ours is5and 1/2 day work week...